रेस्टुरेन्टमा बस्नुनै पर्दैन कुरि कुरि, घरमै बन्छ अब चिकेन तन्दुरी ! « News24 : Premium News Channel
रेस्टुरेन्टमा बस्नुनै पर्दैन कुरि कुरि, घरमै बन्छ अब चिकेन तन्दुरी !
फलामको सिन्कामा झुण्डाएर राखेको कुखुराको रातो रातो सपेटा रेस्टुरेन्टमा देख्दा कसलाई खान मन नलाग्दो हो ? तर पैसा हुनेलेत खालान् नहुनेलाई भने थुक निल्दै हिड्नु सिबाय अरु कुनै विकल्प छैन । अब चिन्ता नलिनुस थुक निल्नु पर्दैन ! तपाइंले जाँगर मात्र निकाल्नु भयो भने घरमै बसेर चिकेन तन्दुरी मज्जाले बनाउन सक्नुहुन्छ ।
चिकेन तन्दुरी बनाउन आवस्यक पर्ने सामग्रीहरु यस्ता छन् !
– १ होल चिकेन
– १/२ चम्चा काजु को पेस्ट
– २ चम्चा मरिच
– १ चम्चा मगज को पेस्ट
– १ चम्चा खसखस को पेस्ट
– १/२ कप क्रिम
– २ चम्चा मक्खन
– नुन स्वाद अनुसार र
– कलर ( स्वास्थ्यको दृस्टीकोणले कलर प्रयोग नगरेकै राम्रो तर हेर्दा भने खाउँ खाउँ झैं लाग्छ )
यस्तो छ बनाउने सजिलो तरिका ‍!
सबै भन्दा पहिला चिकेन को पिस लाई राम्ररी धुनुहोस अब माथिको सबै सामग्री लाई एउटा भाडोमा राखी राम्ररी फिट्ने । तपाइले फिटेको पेस्ट चिकेन मा राम्ररी लागेको हुनुपर्छ ।राम्रो संग मसला लागिसके पछि एउटा भाडो मा ४ घण्टा जति त्यसै छोड्नुस ताकि चिकेनमा मसला भित्र सम्म पुगोस यसलाई मेरीनेंट भन्ने गरिन्छ । ४ घण्टा पछि चिकेन लाई पकाउन माइक्रो वेब अर्थात ओभनमा हाल्नुस वा आगोको भुंग्रो मा झिर उनेर आगोले नछुने गरि अर्थात आगो को रापमा पकाउनुस ।
जब चिकेन को मसलाको मन्द बास्ना आउछ त्यसपछी तपाइले झिकेर चिकेन तन्दुरीको स्वाद घरमै बसेर लिन सक्नुहुन्छ । पैसाको पनि बचत समयको पनि बचत, अब रेस्टुरेन्टमा बस्नु पर्दैन कुरी कुरी घरमै बन्ने रहेछनित चिकेन तन्दुरी !
– सेफ प्रदिप बहादुर घलेको टिप्स